Famoahana vokatra vaovao :: Hampiara-peo amin’ny hira iray i Big Mj sy Ken (Mage 4) • AoRaha
Famoahana vokatra vaovao Hampiara-peo amin’ny hira iray i Big Mj sy Ken (Mage 4)
Fiarahan’ny mpanakanto mivoy gadon-kira samy hafa. Miara-miasa ary miketrika sanganasa iraisana i Big MJ, mpiangaly ny gadona salegy maloya sy RnB sy i Ken, mpihira ao amin’ny tarika Mage 4, fanta-daza eo amin’ny mozika rock. Nampahafantarin’izy mirahalahy tao amin’ny pejy tambajotrantserasera « Facebook », ny fampiaraham-peony ao anatin’ny hira vaovao izay hivoaka atsy ho atsy.
Nisafidy ny tsy hanambara ny hafatra hofonosin’io vokatra io sy ny lohateniny ry zalahy, hatreto. Samy hitondra ny gadon-kira efa nahafantarana azy ireo, hatramin’izay, ireto artista ireto ao anatin’ny hira.
« Mahabe resaka ny maro ny fiaraha-miasa eo amiko sy i Big MJ. Mahafinaritra anefa ny manandrana mampiaraka mozika roa samy hafa ao anatina hira iray. Tsy misy ny tonga lafatra fa aleo miray hina fa samy Malagasy. Tsy manalavitra ny mozika mavesatra ny vazo iarahanay mirahalahy. Manantena fampiarahana talenta amina mpanakanto hafa aho », hoy ny fanehoan-kevitr’i Ken.
« Hataonay fanomezana ho an’ny mpankafy io hira io. Eo am-piketrehana ny feo izahay, amin’izao fotoana izao. Tolorana fisaorana sahady ireo manohana sy miandry ny vokatra, toy izany koa ireo manome tsikera », hoy kosa i Big Mj.
Fampanarahan-dàlana ny orinasa :: Nogiazan’ny fanjakana ny Magro etsy Behoririka
Fiondranana an-tsokosoko :: Tra-tehaka ireo olona fito ambin’ ny folo saika ho any Mayotte